Gumiguru 15, 2019
Steve Morland Food Seed Grain
Kambani yeFood, Seed and Grain, kana kuti FSG, yaramba kuti yakabhadharwa mazana mana emamiriyoni nemadhora ekuAmerica, sezvakataurwa nevamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari.
Kambani iyi inoti yakabhadharwa nemaRTGS pamwe nemaTreasury Bills pafotireza yose yayakatengesera hurumende pazvirongwa zvayo zvakaita sePresidential Input Scheme.
Vakuru vakuru mubazi rezvemari, vanosanganisira Account- General, VaDaniel Muchemwa, Principal Director Budgets, VaZvinechimwe Churu nevamwe vakaudza paramende kuti FSG nemamwe makambani aitengesera hurumende zvekurimisa pasi zvezvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculureainge abhadharwanemari yekuAmerica.
Asi mukuru weFSG, VaSteve Morland, varamba izvi kukomiti yeparamende inoona nezvekurima, vachiti, vakabhadharwa nemaRTGS dollars nemaTreasury Bills.
Sachigaro vekomiti iyi, VaJustice Mayor Wadyajena, vaudza VaMorland kuti vaunze kuparamende humbowo hunoratidza kuti vakabhadharwa nemaRTGS nemaTreasury Bills.
Vanoongora nyaya dzehupfumi vakazvimirira, VaMasimba Manyanya, vaudza Studio 7 kuti zvingave zvinhu zvakashata chose kana vakuru vakuru vebazi rezvemarivakanyepera paramende pamusoro penyaya iyi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende, VaTendai Biti, vakazivisa nezuro kuti vakuru vakuru vekubazi rezvemari ava, pamwe nevekuRBZ, vachabvunzurudzwa zvakare svondo rinouuya pamusoro penyaya iyi nedzimwe dzine chekuita nenyaya dzekurima munyika.
Zvichakadai, VaMorland varamba kuti vane chekuita nekambani inoita zvekuviga vanhu yeFSG sezvakataurwa maVaChuru naVaMuchemwa vachiti kambani yavo haina kutombogara yaita zvekuviga vanhu.
Vatiwo zvichitevera kutaurwa kakaitwa nyaya iyi zvave kuita sekuti kambani yavo inoita zvechitsotsi vachiti kambani yavo inoita basa rayo pachena.
Vaenderera mberi vachiti kubvira muna 2016 kusvika pari zvino, kambani yavo yakaendesa fotireza yese yaidiwa nehurumende pasi zvirongwa zvayo zvePresidential Input Scheme zvakanangana nechibage nedonje.
Vatiwo kunyange hazvo vakatotanga kuendesa kuvarimi fortireza yemwaka wa2019/2020 vanoda mari yekunze kuti vakwanise kugadzira fotireza inokwanira munhu.
Zvichakadai, vakuru vakuru vemamwe makambani anogadziria fotireza anoti Windmill, ZFC pamwe neSable Chemicals vanoti vanokwanisa kugadzira fotireza inokwanira munhu wese munyika kana akawana mari yekunze inokwana.
Mukuru weWindmill, VaGearge Rundogo, vaudza komiti yezvekurima kuti vanokwanisa kugadzira fotireza yakawanda kana vakawana mari yekunze.
Vatiwo pari zvino veruzhinji havasi kukwanisa kutenga fotireza pachavo vega.